Leicester City oo dhulka ku jiiday Arsenal oo ku ciyaareysay 10-xidig + Sawirro – Gool FM
Leicester City oo dhulka ku jiiday Arsenal oo ku ciyaareysay 10-xidig + Sawirro
(England) 28 Abriil Kooxda Arsenal ayaa guul daro xanuun badan kala kulantay Kooxda Leicester City kulan ku soo idlaaday 3-0 xili Arsenal ay ku ciyaarayeen 10 xidig.
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ku soo dhamaaday bar-baro gool la’aan xili labada koox ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan balse Kooxda Arsenal waxaa calaamada casaanka ka qaatay Maitland-Niles daqiiqadii 36-aad ee ciyaarta.
Uhu dambeen kulanka qeebtiisa koowaad ayaa lagu kala nastay bar-baro gool la’an ah, muddo kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Kooxda Leicester oo kaa faa’ideysananeysa calaamada casaanka ee loo taagay Arsenal ayaa la timid 3 gool qeebtii dambe ee ciyaarta.
Goolka hore waxaa dhaliyey Tielemans daqiiqadii 59 aad ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay Maddison, Arsenal’ oo ku ciyaareysay 10-xidig ayaa kulanka oo dhan sameesay hal isku day oo gool loo filan karay.
Labada gool ee kale waxaa raacsaday Vardy oo niyada ka dilay taageerayaasha Kooxda Arsenal isaga oona haatan ka dhaliyey Arsenal 8 gool oo Premier league ah.
Hamigii iyo rajadii ay Arsenal ka qabtay kaalmaha afarta sare ayaa god mugdi sii galay wallow hadii ay soo hantaan koobka Europe League aya imaan karaan tartanka dhaga weyne.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Arsenal iyo Leicester ayaa ku soo idlaaday 3-0 oo ay guushu ku raacday Kooxda ka arimisa King Power.
Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Burnley iyo Manchester City oo la shaaciyey
John Terry oo shaaciyey xiddiga uu rumeysan yahay inuu caawa ku guuleysan doono abaal-marinta xiddiga sanadka ugu fiican Premier League